India: Hurumende yeHodisha inoti matanho akakwana akatorwa kudzivirira zvipembenene India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Hurumende yeHodisha inoti matanho akakwana akatorwa kudzivirira zvipembenene India News
India: Hurumende yeHodisha inoti matanho akakwana akatorwa kudzivirira zvipembenene India News
BHUBHESHARI: The Odisha hurumende vakadaro Chishanu kuti yakatora matanho akakwana kudzivirira kuputika kwechirwere chinotevera chimvuramabwe ' Fani .
"Hapana nzvongo chirwere vakanga inotaurwa chero 14 vawirwa nenjodzi nedutu," akadaro mumwe mukuru okuti, achiwedzera kuti mishumo korera yatanga pachaunga chikamu kwaizova zvachose kusina pakwakavakirwa.
Kunyange zvazvo zviitiko manyoka dzave kushumwa pano neapo mune Puri uye mamwe maruwa, hapana atora chakafanana idenda, akadaro wezvoutano, achiwedzera kuti zvikwata muAtlantic kubata zvoutano. .
The Munyori Health uye Family, P. K Meherda, akashanyira nzvimbo sei nedutu uye vaipa zvakakwana rwemhuri zvinokosha zvinodhaka mune zvose zvoutano zvivako, vakati mumwe mukuru .
Vakati Shalini Pandit, mutungamiri we National Health Mission (NHM), aive achitarisana nevashandi vemumunda uye mairi ehutano huripo hunoita munzvimbo.
Zvichida 89 091 mvura yakasununguka yakasvibiswa uye mhando ye 60 yakaedzwa dengue yakapa migumisiro yakaipa, mukuru wehurumende akati.
Munguva iyi, mamiriro okunze anopisa uye anonyorova akaita kuti nhamo dzevagari vemuShona dziwedzere Puri weruwa nokuti magetsi emagetsi haasati adzorerwa mumhuri zhinji.
Panharaunda ye1.58.805 magetsi, vatengi vadzo vakadzorerwa mumhuri ye4.800, vakawedzera maneja.
Mumunharaunda yeNimapada, misha ye840 chete ye1,22,549 yakapiwa magetsi, iye akati.
Zvisinei, pakanga pasina ruzivo vamwe namatombo Puri dunhu sezvo Brahmagiri, Astarang, Chandanpur, Delang, Gadisagada, Kakatpur, Konartk, Krushnaprasad, Pipili, Ramachandi uye Satyabadi, akawedzera.
USA: Missouri inogamuchira mutemo wekubvisa pamuviri